IziQinisekiso zeSayensi kunye neTekhnoloji yaseOstreliya | Ukuhamba kwe-Absolut
ULuis Martinez | 20/04/2021 09:32 | Ukuhlaziywa ukuba 20/04/2021 10:34 | Ostreliya
Azikho izinto ezininzi zenzululwazi nezobuchwephesha zaseOstreliya ezinjengezo zafunyanwa kwamanye amazwe ehlabathi. Isizathu silula: Ostreliya lilizwe mncinci noko kwaye, ngokulula, khange ibenalo ixesha lokugxininisa kakhulu kwezi nkalo.
Nangona kunjalo, ilizwe lolwandle sele lisinike isabelo salo esilungileyo sokufumana. Kwaye, ngaphezulu kwako konke, kwe kubaluleke kakhulu kwisayensi kwaye ithandwa kakhulu ngokweendlela. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokuqanjwa kwesayensi kunye netekhnoloji yase-Australia, siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Ezona zinto ziphambili zenzululwazi nezobuchwephesha zaseOstreliya
1.1 Iziphumo zeSayensi zaseOstreliya
1.1.1 Ukusetyenziswa kwepenicillin
1.1.3 Ugonyo lwePapilloma
1.1.5 Iskena se-ultrasound
1.1.6 Ulondolozo lwendalo esingqongileyo ngokusebenzisa iingqaqa zekorale
1.2 Izixhobo zetekhnoloji yase-Australia
1.2.2 Ibhokisi emnyama yeenqwelo moya
1.2.3 iimaphu zikagoogle
1.2.4 Uqheliso lombane
Ezona zinto ziphambili zenzululwazi nezobuchwephesha zaseOstreliya
Njengoko sikuxelele, sele kukho inani elifanelekileyo lezinto ezifunyenwe ngabantu base-Australia. Ngesi sizathu, kwaye ukwenza ukuba ukubonakaliswa kwethu kucace gca, siza kuqala sithethe ngezona zibaluleke kakhulu kwezenzululwazi kunye nezinye ezibaluleke kakhulu kwitekhnoloji.
Iziphumo zeSayensi zaseOstreliya
Ngokubhekisele kwezi, izinto zase-Australia ziyincedile i Impilo yabantu (njengoko siza kubona kwangoko, zinento yokwenza nepenicillin) kunye ne ngileyo. Ezinye zezinto ezifunyanisiweyo zezi sizokucacisela zona.
Wonke umntu uyazi ukuba i-penicillin yayifunyenwe yiBritane UAlexander Fleming ngo-1928. Nangona kunjalo, into engaziwayo kangako kukuba babengama-Australia UWoward W. Florey naseJamani U-Ernst B. Chain oyile indlela yokwenza ngobuninzi bayo, into eya kuthi ekugqibeleni isindise izigidi zobomi babantu. Ngapha koko, xa uFleming wafumana Umvuzo weNobel ngo-1945, wayenza kunye naba babini asebenza nabo.
Ilitye lokubonisa imbeko ku-Ernst B. Chain
Esi sixhobo sonyango sivumela abaguli bentliziyo ukuba bazigcine kubethwa rhoqo. Ithumela umothuko omncinci wombane kwilungu ukuze uncede wenze njalo. Yayiyilwe yi-physicist Edgar umnquba kunye nogqirha UMarc Lidwill, bobabini baseAustralia, phaya kwiminyaka yoo-1920.
Nangona ezinye iingcali zangenelela, eli chiza liphakathi kwezinto zase-Australia zenzululwazi kunye nezobuchwephesha ngokwawo. Babengabaphengululi ababini abavela kwiDyunivesithi yaseQueensland, UIan Fraser y UJian Zhou, ngubani okwazileyo ukwenza isuntswana elifana neli ntsholongwane elomeleza amajoni omzimba ngokuchasene nalo.
Esi sixhobo sincede amakhulu amawaka abantu abazizithulu ukuba baphucule ukuva kwabo. Ifakelwe entloko kwaye iyakwazi ukukhuthaza imithambo-luvo yokuva. Ibiyi I-Graeme clark, uprofesa kwiYunivesithi yaseMelbourne, owasungula oku. Uyise wayenengxaki yokungeva, kwaye ngelixa wayezama ukumnceda, wafumanisa esi sixhobo siluncedo.
Esi sixhobo sonyango esisetyenzisiweyo namhlanje ukwenza Imitha yesandi Yenziwe yiLebhu yeAustralia yeClassic Acoustics, neyathi yathiywa igama ngokuchanekileyo IZiko le-Ultrasound. Abaqambi bayo bafumene indlela yokufaka ii-echoes ze-ultrasonic ezikhupha izicwili zomzimba wethu kwaye zizitshintshe zibe yimifanekiso. Ukuthengiswa kwayo kwaqala ngo-1976.
Ulondolozo lwendalo esingqongileyo ngokusebenzisa iingqaqa zekorale
Njengoko usazi, i Omkhulu weBharrier Reef kumantla mpuma eOstreliya. Kukho ngaphezulu kwamawaka amabini anamakhulu amahlanu eekhilomitha zesakhiwo esikhulu samanzi esisemngciphekweni ngoku. Mhlawumbi yiloo nto ama-Australia ebesoloko ehamba phambili Oceanography.
El Iziko laseOstreliya leNzululwazi yaseLwandle phuhlisa iiprojekthi ezahlukeneyo ukugcina okusingqongileyo. Phakathi kwezona zibalulekileyo ngulowo unikezelwe kuye ukulawulwa kokulima kwekorale. Injongo yayo kukubuyisela iingqaqa kwindawo yazo yendalo. Ngokunjalo, ezi zizinto eziphilayo ezinegalelo kwi ulungelelwaniso lokusingqongileyo elwandle kunye nokuzigcina kwiziphumo ezinazo kutshintsho lwemozulu.
Omkhulu weBharrier Reef
Izixhobo zetekhnoloji yase-Australia
Eyona nto ithandwayo kwezobuchwephesha yaseOstreliya ngaphandle kwamathandabuzo yile wifi, esiza kuthetha ngayo kwinqaku elilandelayo. Kodwa kukho ezinye eziye zanceda ukuphucula ukhuseleko lomoya okanye ezinye iinjongo ezahlukeneyo. Makhe sizibone.
Unxibelelwano olungenazingcingo kwi-Intanethi luye lwaququzelela ukusetyenziswa koku emakhaya naseziofisini. Isixhobo esiluncedo esinjalo sibangelwa sisazinzulu sase-Australia UJohn O'Sullivan kunye neqela lakhe labasebenzisana noSidney. Bonke babengabakwa-CSIRO, umzimba we Commonwealth lizinikele ekukhuthazeni uphando lwezenzululwazi nobuchwepheshe.
Ibhokisi emnyama yeenqwelo moya
Esi sixhobo sibekwa ziinqwelomoya kwihlabathi liphela namhlanje, njengoko usazi, ukuba uyazi ukuba kwenzeka ntoni enqanaweni ngexesha elingaphambi kwengozi. Zonke iincoko zomqhubi wenqwelomoya kunye neeparameter zenqwelomoya zibhalwe kuyo, nayo engenakonakala. Umqambi wayo yayingu-Australia UDavid warren, owaswelekelwa ngutata wakhe kwingozi yenqwelomoya.
Ayisiyiyo kuphela igalelo lelizwekazi lolwandle kukhuseleko lokuhamba ngenqwelomoya. Ngo-1965, UJack Grant, Umsebenzi weenqwelomoya wenqwelomoya, wenza i isilayidi sezongxamiseko. Isetyenziselwa ukuthoba abakhweli emva kokufika kakubi.
Nangona kwakungabizwanga njalo ngelo xesha, esi sixhobo siluncedo kakhulu ngokuyinxenye senziwe ngabantu base-Australia UStephen Ma y UNeil Gordon ecaleni kukaDanes Lars noJens Rasmussen kwii-XNUMXs zokuqala. Kamva, xa ukuthengwa kuthengwa nguGoogle, ukuba yafumana igama layo langoku.
Ibhokisi emnyama yenqwelomoya
Ukuba uyayithanda i-DIY, uya kwazi ukuba singakanani esi sixhobo esenza umsebenzi wakho ube lula. Ewe, ikwayinto yase-Australia. Kule meko, kungenxa yenjineli yombane UArthur James, owenza eyokuqala kwangoko kwangowe-1889. Ewe kunjalo, yayingenakuphatheka, kodwa inkulu kakhulu. Nangona kunjalo, yayikwazi ukugqobhoza amatye.
Ifriji yendabuko ethi namhlanje ibonakale ibalulekile kumakhaya ethu imalunga neminyaka elikhulu elinamashumi amahlanu ubudala. Xa ingekho, ukutya bekugcinwa kweyona ndawo ipholileyo emakhayeni. Into ebangela umdla kukuba, ngabaphathi beshishini lotywala laseOstreliya abaqeshayo UJames Harrison ukusombulula iingxaki zolondolozo lwesiselo sakhe ngo-1856.
Ukuqukumbela, sikubonise ezinye Inzululwazi yase-Australia kunye nezobuchwepheshe. Njengoko ubona, igalelo lelizwe laselwandle ekuqhubeleni phambili uluntu lube ngaphezu kokuthakazelisa kwaye, ngaphezu kwako konke, kubalulekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Inzululwazi yase-Australia kunye nezobuchwepheshe
I-ana mercedes villalba G. sitsho
Kuhle kakhulu ukuba bathini okanye bachaze ntoni
Phendula u-ana mercedes villalba G.